Izao no fotoana nanjakan'ny teknolojia manerana an'izao tontolo izao ary miankina amin'izany ny olona rehetra miaina eto an-tany. I Shina dia mitarika amin'ny famokarana fandrosoana vaovao amin'ny teknolojia maoderina saingy ny firenena sasany dia tsy manaiky ny zava-bitany. Mihevitra ireo firenena ireo fa miezaka ny hanapaka azy ireo i Shina amin'ny fampiasana ny teknolojiany sy ny fanaovana ankivy ny teknolojian'izy ireo, ny orinasa teknolojia Indiana dia nampiditra fampiharana iray antsoina hoe Remove China Apps Apk.
Ny orinasa dia antsoina hoe One Touch App Labs. Araka ny efa fantatrareo ny disadisa misy eo amin'i India sy Shina. Nanambara ny fanaovana ankivy amin'ny entana sy tolotra Shinoa rehetra mandeha ao amin'ny firenena i India ary ao anaty lisitra ihany koa ny fanaovana ankivy amin'ny rindrambaiko Shinoa. Ny tompon'ny Remove China Apps dia manome anao fomba hanaovana ankivy ny lozisialin'i Shina na lazao fotsiny hoe apps.
Tamin'ny fotoan'ny areti-mifindra, nanomboka fanentanana antsoina hoe Aatma Nirbhar Abhiyan i India. Ity fanentanana ity dia mikasika ny hevitra hampiasa ny vokatra vita eto an-toerana araka izay azo atao. Miezaka manao ny zava-drehetra any India izy ireo. Ny tompon'ny One Touch App Labs dia nanome ny anjarany tamin'ny fampielezan-kevitra tamin'ny alalan'ny fandrafetana sy fampivoarana fampiharana iray afaka maka ny fampiharana rehetra miorina amin'ny Shina amin'ny finday Android-nao.
Esory ny China Apps amin'ny findainao amin'ny dingana mora. Holazainay aminao ny fomba fampiasanao ny fanalana fampiharana china amin'ny findainao. Rehefa manokatra ny fampiharana ianao dia mahazo efijery mipoitra ary mila manindry ny bokotra Scan izao ianao. Ny App Remove China dia hanomboka hikaroka ny Android-nao amin'ny fampiharana sinoa ary hanome anao lisitry ny fampiharana Shinoa rehetra. Azonao atao ny manala ny fampiharana rehetra tianao amin'ny paompy iray amin'ny bokotra fanalana.
Esory ireo mpandrindra ny China App fa nitandrina ny firafitry ny fampiharana ho tsotra be mba hahafahan'ny olona tsirairay mampiasa ny app azy ireo. amin'ny alàlan'ity fampielezan-kevitra ity dia voakasik'izany ireo fampiharana sy lalao malaza indrindra. PUBG Mobile dia malaza be manerana ny firenena ary Tiktok dia manana tobin'ny mpankafy any India ihany koa. Misy fampiharana hafa izay ho voakasik'izany toa ny Mobile Legends, Shareit, VMate, UC Browser, Bigo live, Vigo Video, ary maro hafa.
Amin'izao fotoana izao, ny fampiharana dia tsy afaka mamafa afa-tsy ireo fampiharana izay alaina sy apetraka satria raha hamafana ireo fampiharana efa napetraka na bloatware dia mila mamaka ny findainao ianao. Ny fanavaozana amin'ny ho avy dia mety misy safidy toy izany.
Endri-javatra manan-danja amin'ny Delete China Apps Apk
Ny rindranasa rehetra dia azo esorina amin'ny Tap iray.
anarana Esory ny fampiharana China
Developer Labs iray Touch App
Anaran'ny fonosana com.chinaappsremover
Ilaina ny Android 4.3 sy ambony
Eny, ara-dalàna ny fampiasana azy. Ity dia fampiharana ofisialy ho an'ny fivarotana app Google. Manaraka izany ny olona maromaro ary mahazo fanamarihana tsara.
Tsy izahay no mpamorona ofisialy ho an'ny fampiharana fa ny mpandrindra ofisialy dia manome anao antoka fa tsy ho voan'ny virus na karazana malware izany karazana fampiharana izany. Ho an'ny fahafaham-po ho avy anao, misy ny fampiharana amin'ny fivarotana Apps ofisialy, ary ny app store ihany no mamela ireo fampiharana izay azo antoka ho an'ny mpampiasa.
Ahoana ny fomba fampidinana esory ny China Apps Apk
Efa nilaza izahay teo aloha fa misy amin'ny app play ity fampiharana ity ary azonao apetraka mora foana avy eo. Azonao atao ihany koa ny misintona ny Apk amin'ny bokotra fampidinana nomena eo an-tampon'ny sy ambany amin'ity lahatsoratra ity. Ny fisintomanao dia hanomboka amin'ny paompy eo amin'ny bokotra. Takiana aminao ny miandry segondra vitsivitsy aorian'ny fitendrenao ny bokotra.
Ahoana ny fomba hametrahana ny famafana ny China Apps Apk?
Ho an'ny fametrahana ny Apk dia mahazo fidirana amin'ny fametrahana avy amin'ny loharano tsy fantatra ianao. Mila mahazo fidirana amin'ny Fikirakira telefaona> Fikirana fiarovana ianao.
Jereo izao ny Apk alaina ary kitiho eo amboniny.
Rehefa manomboka ny mpamosavy dia kitiho ny bokotra Install ary andraso ny famaranana ny fizotrany.
Ho vonona handeha izao ny fangatahanao.
Raha te ho anisan'ny fanentanana Aatma Nirbhar Abhiyan ianao dia manana ny vintana. Apetraho ity fampiharana ity ary esory ny Apps Sinoa rehetra amin'ny paompy iray.
Raha tianao ity lahatsoratra ity ary maniry fampiharana Android vao haingana kokoa ianao dia mitsidiha ny anay Website.
Sokajy Tools, Apps Tags Esory ny fampiharana China, Esory ny China Apps Apk, Esory ny China Apps App Post Fikarohana
MyFlixer Apk v12.0.2 Download ho an'ny Android [2022 Update]